Rekhoda Screen elula, ukhetho olutsha lokurekhoda isikrini sakho sePC | Ubunlog
I-Screen Recorder elula, ukhetho olutsha lokurekhoda isikrini sakho sePC
Ndiyazi. Zininzi ezinye iinkqubo ezisivumela ukuba sibhale phantsi ikhusi lePC yethu, kodwa kule posi siza kuthetha ngento entsha. Imalunga ne Rekhoda Screen elulaInkqubo, njengoko igama libonisa, yinkqubo elula yesoftware iyakusivumela ukuba sibhale ikhusi kwikhompyuter yethu. Ekuqaleni, i-SSR yenzelwe ukurekhoda imveliso kwimifanekiso yeenkqubo kunye nemidlalo, into eye yafezekiswa ngelixa ligcina ukusebenziseka ngokulula ngelixa liphucula njengenketho.
Nangona iRekhodi yeScreen elula iyahambelana nezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeFedora, i-CentOS okanye i-RHEL, kule post siza kukufundisa ukuba uyifaka njani kwinkqubo yokusebenza enika igama kule blog, oko kukuthi, ku-Ubuntu nakwezinye izinto ezisebenzayo. iinkqubo ezisekwe kwiDebian okanye kwinkqubo yokusebenza eyenziwe yiCanonical, enje ngeLinux Mint. Siza kufaka i-SSR kwi-Ubuntu nazo zonke iinkqubo zokusebenza ezisekwe kuyo ngokulandela amanyathelo achazwe apha ngezantsi.
1 Uyifaka njani iRekhodi yeScreen elula ku-Ubuntu
2 Indlela ukurekhoda screen sakho PC kunye Screen Recorder Simple
Uyifaka njani iRekhodi yeScreen elula ku-Ubuntu
Ukufaka i-SSR ku-Ubuntu okanye nayiphi na inkqubo yokusebenza esekwe kwinkqubo yokusebenza yeCanonical, konke ekufuneka sikwenzile kukuvula i-terminal kwaye uchwetheze le miyalelo ilandelayo:
Ukusuka kwimiyalelo yangaphambili, owokuqala uya kongeza indawo yokugcina eyimfuneko ukufaka iRekhodi yeScreen elula, elesibini liya kuhlaziya oovimba abagcino kwaye owesithathu afake isoftware.
Indlela ukurekhoda screen sakho PC kunye Screen Recorder Simple
Into yokuqala kuya kufuneka siyenze, ngokusengqiqweni, ukuvula i-SSR. Ukwenza oku, cofa nje iqhosha leWindows kwaye ubhale umbhalo "olula", oya kwenza ukuba uphawu lwesoftware luvele. Kwezinye iincasa ze-Ubuntu, siya kukhangela iRekhodi yeScreen elula kwimenyu yezicelo. Sikhetha inkqubo kunye nescreen esifana nale uyibonayo xa usiya phambili kule post siza kuvela. Konke ekufuneka sikwenzile kweli nqanaba kukucofa u "Qhubeka". Emva koko siza kubona iwindow ngolu hlobo lulandelayo:
Nangona kungabonakali ngathi, ukurekhoda isikrini kunye ne-SSR inomdla kakhulu. Singagcina phantse ngokuthe ngqo ngaphandle kokuguqula amaxabiso amaninzi, ngokwenza oku kulandelayo:
Kwi "Igalelo levidiyo" siya kukhetha ukurekhoda kwiscreen esigcweleyo, uxande nje, landela isikhombisi okanye, kwimeko yovavanyo, Rekhoda i-OpenGL.
Kwi- "Audio Input", siya kukhetha ukuba siqokelele siphi na isandi. Siza kuqwalasela oku kwicandelo "loMthombo".
Kwiwindow elandelayo, phantsi kwe- «Ifayile», sinika igama ukurekhoda.
Ukuba sinqwenela, siphawula ibhokisi ethi "Yahlulahlulwe ngokwamacandelo", kodwa ndikhetha ukurekhoda onke amanyathelo njengoko enjalo kwaye emva koko ndihlele ngokwam kwenye inkqubo.
Kwi «Isikhongozelo» sikhetha ifomathi esifuna ukuyigcina ngayo. I-MKV ilungile, okoko nje singadingi inqanaba elithile loxinzelelo, kwimeko apho kunokuba ngumbono olungileyo ukugcina ifayile njenge-MP4.
Kwicandelo le "Vidiyo" siya kukhetha ukuba yeyiphi ikhowudi esifuna ukuyisebenzisa. Kwezi zinto zibonelelweyo, ndiza kushiya ukhetho olungagqibekanga.
Kwicandelo le- "Audio" siza kwenza ngokufanayo nakwinyathelo elidlulileyo, oko kukuthi, khetha ikhowudi kwaye ukhethe ireyithi encinci. Ndikhetha ukuba i-codec yeaudiyo ibe yi-MP3 ukunqanda iingxaki zokuhambelana kwixesha elizayo. Ukuba umsindo ubalulekile kuwe, sinokulonyusa ixabiso le-bitrate kuwo.
Emva koko ucofe ku «Qhubeka».
Kwiwindow elandelayo sinokumisela ulawulo esiza kulusebenzisa ukuqala ukurekhoda. Ngokuzenzekelayo, indibaniselwano yesitshixo ngu "Ctrl + R".
Ukuba sicofa u "Qala ukurekhoda", inkqubo iya kuqala ukurekhoda yonke into eyenzekayo kwi-PC yethu, kubandakanya iaudiyo yangaphakathi (ukuba siyayilungisa).
Nje ukuba ukufundisa okanye oko sifuna ukurekhoda kugqityiwe, sinokucofa ku "Misa ukurekhoda", kokubini kwiscreen esivele kwinqanaba le-10 nakwithoni yetreyi eya kuba kwindawo ephezulu.
Okokugqibela, siza kucofa ku «Gcina ukurekhoda». Ngokuzenzekelayo, ividiyo erekhodiweyo iyavela kwifolda yethu kwaye iya kuba negama esililungiselele kwinyathelo lesi-4 lalabo bachazwe kwesi sifundo. Ngoku singayihlela ngayo nayiphi na inkqubo kwaye sabelane ngayo nangayiphi na indlela.
Njengoko ubona, igama "elilula" egameni lenkqubo alixoki. Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, ezinje ngezo zivumela ukurekhoda isikrini kunye nesidlali semultimedia VLCUkurekhoda iscreen sePC yethu kunye ne-SSR kulula kakhulu ngaxeshanye ukuba isinike ukhetho olunye okanye nangaphezulu kunezinye iinkqubo. Ucinga ntoni ngeScreen Screen Recorder?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Screen Recorder elula, ukhetho olutsha lokurekhoda isikrini sakho sePC
Ngaba uyazi ukuba kukho into elinganayo yeWindows? Ndisebenzisa esi sicelo kwiXubuntu yam emsebenzini kodwa ekhaya ndineWindows endiyidlalayo kwaye yinkqubo enomdla kakhulu
Ngoku ungayifumana kwiVenkile yeSoftware Ubuntu. Namhlanje ndiyifumene ngoluhlobo.
Isifundo sihle kakhulu, kufanelekile ukuba usifunde nawe!
lusizi ukuba ayivumeli ukurekhoda ilizwi kunye nenkqubo yesandi ngaxeshanye, okanye ubuncinci andikaze
Ami isebenze kum ndibeka imiyalelo emva koko ndangena kwisoftware kwaye ndayifumana
Isifundo siluncedo kakhulu, enkosi.
Ndinombuzo kuphela ukuba irekhoda umsindo wangaphakathi nangaphandle ngaxeshanye ...
Hayi, unokurekhoda kuphela iaudiyo yangaphakathi okanye yeaudio yangaphandle
UOscar Reyes Guerrero sitsho
Enkosi kakhulu, ukusukela namhlanje - 2021- le nkqubo isebenza ngokugqibeleleyo
Phendula uOscar Reyes Guerrero
Ungayithumela njani imifanekiso kwi-Twitter kwi-Ubuntu desktop
Inguqulelo entsha ye-Ubuntu iya kuhambelana neenkqubo ze-Apple's AirPrint